भेरी अस्पतालको १३१ औं वार्षिक उत्सव ! « News24 : Premium News Channel
भेरी अस्पतालको १३१ औं वार्षिक उत्सव !
नेपालगन्ज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालले मंगलवार पहिलो पटक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि आफ्नो १३१ औं स्थापना दिवस मनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा।रोशन पोख्रेलले वार्षिक उत्सवको उद्घाटन गरि १३१ औं वार्षिक उत्सब भेरी अस्पतालले पहिलो पटक मनाएको हो ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रेषण अस्पतालको रुपमा रहेको भेरी अस्पतालले वार्षिक उत्सवको अवसरमा अस्पतालमा लामो समयदेखि काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ ।
दिवसकै अवसरमा यसअघि सम्पन्न भईसकेका आन्तरिक खेलकुद प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीहरुलाई समेत सम्मान र मायाको चिनो प्रदान गरेको भेरी अस्पताल विकास समितीका अध्यक्ष प्रमोद धितालले बताउनुभयो । भेरी अस्पताल वि.सं.१९४७ मा स्थापना भएको थियो ।
भेरी अस्पताल देश कै नमुना अस्पतालको रुपमा परिचित रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शम्सेर राणाले बताउनुभयो । भेरी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा स्थापना गरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ फड्को मार्ने भएको हुनाले यसलाई विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोख्रेलले कोभिड महामारीमा भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको थियो । उहाँले कोभिड महामारीमा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरि अहोरात्र खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङस्टाफप्रति उहाँले उच्च सम्मान प्रकट गर्नुभयोे । उहाँले अस्पताल विकास समितिलाई भर्ति केन्द्र नबनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
‘देशभरका अस्पतालमा विकास समितिले भर्ति केन्द्र बनाउन थालेका छन् उहाँले भन्नुभयो–‘यसलाई तत्काल रोक्नु पर्छ ।’
उहाँले विकास समितिका कर्मचारीहरुलाई छिट्टै नीतिगत पहल गरेर बढुवा र स्थायीको व्यवस्थापनको तयारीमा मन्त्रालय रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले भेरी अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा विकास गर्न आफु सकारात्मक रहेको भन्दै यसमा राजनीतिक दलको सहमति जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाले कोभिड महामारीमा भेरी अस्पतालले उल्लेखनिय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि महामारीसँग जुध्न यस्तै खाले समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सांसद आइपी खरेलले अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवालाई थप गुणस्तरीय र बिरामीमैत्री बनाउन सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा एमाले नेता सुर्य ढकाल, काँग्रेस नेता कपिल शर्मा, अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष वेदप्रसाद आचार्य, पूर्व मेसु डा श्यामसुन्दर यादवलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अस्पतालका मेसु डा. प्रकाश थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अस्पतालमा २५ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।